Sidee ayey noqonaysaa SHAXDA xulka England kulanka ay wajahayaan Slovenia, maadaama la filayo in kulankaas keydka la dhigo Wayne Rooney? – Gool FM
(England) 10 Oktoobar 2016 – Kabtanka kooxda Man United iyo xulka qaranka England ee Wayne Rooney ayaa kursiga keydka la galin doonaa kulanka xulkiisa saddexda libaax uu la ciyaari doono Slovenia ee isreeb-reebka Koobka Adduunka sida ay warinayso inta badan saxaafadda Ingiriisku.
Shabakadda ciyaaraha ee Sky Sports waxa ay leedahay waxa ay u muuqataa inuu tababaraha KMG ah ee xulka England Gareth Southgate go’aan ka gaaray kabtankiisa Rooney, isla markaana la filayo inuu keydka u dhaadhicin doono kulanka ka dhacaya Ljubljana.
Haddaba waxaa la is waydiinayaa sida ay noqonayso shaxda xulka qaranka England kulankaas ay wajahayaan Slovenia?
Jariiradda Metro ayaa samaysay shaxda xulka England ee kulankaas iyadoo uu ka maqan yahay Rooney, waxaana ay booskiisa ku bedeshay Eric Dier:-